A bụ m nwaanyị mbu nke Naijiria: Aisha Buhari | odumblog
A bụ m nwaanyị mbu nke Naijiria: Aisha Buhari
posted on Jun. 22, 2019 at 8:18 am June 22, 2019
N’afọ ise gara aga, mgbe onyeisi ala Muhammadu Buhari bara n’ọchịchị, o kwuru na-agaghị enwe okwa nwaanyi mbu nke obodo ‘first lady’ Naijiria, kama na-aga akpọ nwunye ya, nwunye onye isi obodo ‘wife of the president’.
Mana ụbọchị Tọọzdee gara aga, na nhibe ndi nwunye ndi gọvanọ Naijiria, nwunye onye isi obodo Naijiria bụ Aisha Buhari nyere iwu ka akwụsi ịkpọ ya nwunye onye isi obodo ma kpọwa ya ‘nwanyị mbu nke ala Naijiria’. O kwukwara na nke a ga-abụ ihe a ga-akpọ nwunye ndi gọvanọ steeti Naijiria. O kwuru nke a na emume inye asambodo ndi nwunye ndi gọvanọ emere na ‘Banquet Hall of Presidential Villa’ n’Abuja.
Buharia kwuru n’ajụjụ ọnụ ajụrụ ya n’ọnwa Decemba n’afọ 2014, na ọ bụghị ihe edere ede n’usoro ọchịchị Naijiria na a ga-enwe ọkwa Nwanyi Mbu nke obodo. Ya mere na-aga akpọ nwunye onye isi obodo ọ bụla ‘nwunye onye isi obodo’.
Mana ugbu a nwunye ya bụ Aisha chọrọ igbanwe aha. Ndi Naijiria na-atụ anya ihe onye isi obodo ga-eme maka nke a.
odumblog June 22, 2019
Super Eagles alaala azụ n’ogo ndi kacha agba bọọlụ – FIFA
Lawan anabata Rochas Okorocha dika onye omeiwu